Home Wararka Laftagareen oo kala diray maamulkii degmada Baydhabo, hogaan cusubna magacaabay
Laftagareen oo kala diray maamulkii degmada Baydhabo, hogaan cusubna magacaabay
War qoraal ah oo ka soo baxay Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Maamulka Koofur Galbeed Mohamed Abuukar Cabdi ayaa waxaa uu xilkii ka qaaday Maamulkii Magalaada Baydhabo, waxaa uuna magacaabay maamul cusub.
Masuuliyiinta la magacaabay ayaa waxaa ka mid ah
1: Guddoomiyaha iyo duqa Magaalada Baydhabo ayaa waxaa loo Magacaabay Cabdullaahi Cali Watiin oo horay xilkaasi soo qabtay.
2: Guddoomiye kuxigeenka Maamulka iyo Maaliyadda ayaa waxaa loo Magacaabay Mucaawiye Ibraahim Cali.
3: Guddoomiye kuxigeenka Arrimaha Bulshada ayaa sidoo kale waxaa loo Magacaabay Cabdullaahi Ibraahim Nuur.
Previous articleMuqdisho oo ay ku soo kordhayaan iibinta iyo isticmaalka walxaha maanka dooriya
Next article‘Ayaan Bow’ and her fight for Somaliland recognition on the international stage
(Akhriso) Kenya oo beenisay in aay faragelin ku hayso arrimaha Soomaaliya